Madaxweynaha Mareykanka oo fasaxa weeraro hor leh oo ka dhan ah Alshabaab - Somalia Focus
by Hassan Ali | Friday, Mar 31, 2017 | 160 views
31,March,2017(SofoNews) Go’aankan ayaa waxa ay taliyaasha ciidamada Maraykanka ee Afrika ka howlgala ay awood u siineysaa inay qaadi karaan weeraro duqeyn cirka ah iyo weliba sidoo kale weeraro dhulka oo lagu qaado ururka isbahaysiga la ah Alqaacida ee Alshabaab.
Mr Trump ayaa saxiixay Arbacadii shalay ahayd wareegto qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya lagu sheegay inay yihiin meel ay ku xoogan yihiin wax loogu yeeray Cadowga,halkaa oo ah Aag Dagaal iyadoo xeerkan ay hirgelintiisu ay soconayso ugu yaraan 180 maalmood oo la mid ah lix bilood.
Wargeyska The New York Times ayaa daabacay in loo gudbiyay Madaxweyne Trump 12kii March ee sanadkan in uu dabciyo sharciyada awood u siinaya ciidamada Maraykanka in ay ka howlgalaan dalka Soomaaliya. General Thomas D. Waldhauser oo ah taliyaha Africa Command ayaa arrintan meel fagaare ah ka sheegay 24kii bishan.March.
Iyadoo markii hore ay ahayd in Madaxweynuhu uu fasaxo weeraro gaar ah oo la qaadayo ayaa hase ahaatee sharcigan waxa uu siinayaa ciidamada Maraykanka in ay duqeyn karaan dadka ay uga shakiyaan inay yihiin Alshabaab.
Sharciyadan ayaa waxa ay oggolaanayaan in weerarada ay ku dhiman karaan dad rayid ah waxana sidoo kale sharciyadan uu Madaxweyne Trump ku soo rogay dalka Yemen waxyar kadib markii uu talada dalkiisa la wareegay.
Sharciyadan cusub ee Madaxweyne Trump uu ugu fasaxayo ciidamada inay siday doonana u adeegsadaan awoodaada ayaa horaantii bishan waxaa ay sababtay in boqolaal ruux oo rayid ah ay duqeyn ugu dhintaan magaalada Mosul ee dalka Ciraq halkaa oo dagaal loogaga horjeedo dagaalyahanada IS ay ka soconayaan.
Go’aanka Madaxweyne Trump uu ku fududeeyo in weeraro lagu qaadi karo dalka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyadoo abaar daran ay ka jirto inta badan dalka Soomaaliya taasoo sababtay in qoysas badan ay ka barakacaan deeganadoodii kadib markii ay abaarta ku xoolo beeleen.
Dad ku dhaawacmay Madaafiic ku dhacday Meel U dhow Villa Soomaaliya